Contemp समकालीन ग्यालिश लेखकहरू जसलाई ज्ञात हुनुपर्दछ वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, नोभेला, कालो उपन्यास, आतंक
म केहि दिन खर्च गर्दैछु छुट्टियाँ को रियास बाजामा Galicia। र यो पहिले नै २१ बर्ष हो। मलाई यो देशको बारेमा सबै कुरा मनपर्दछ र, यसको साहित्य पनि। त्यसो भए, त्यहाँ धेरै छन्, आज म समीक्षा गर्दछु 21 को समकालीन गैलिशियन लेखकहरू अधिक प्रतिनिधि र अधिक सफल। उनीहरु मानुएल रिवास, पेद्रो फेइजो, मनेल लोरेरो र फ्रान्सिस्को नार्ला.
1 पेड्रो Feijoó
2 मनेल लोरेरो
3 मानुएल रिवास
4 फ्रान्सिस्को नारला
(Vigo, 1975) फेइजो स्यान्टियागो डे कम्पोस्टेला विश्वविद्यालयबाट गैलिशियन फिलोलोजीमा स्नातक गरे। उनले संगीतकारको रूपमा व्यवसायिक अभ्यास गरेका छन् र निर्माता र कम्पोजरको रूपमा गहन करियर रहेको छ। उनको पहिलो उपन्यास, कालो विधा र Vigo र पोन्तेवेद्र मुहाना मा सेट, समुद्रका बच्चाहरू (ओएस फिलोज डो मार्), २०११ Xerais उपन्यास पुरस्कार को लागी एक फाइनलिस्ट थियो र गैलिसिया मा एक साहित्यिक घटना थियो।
उनको अर्को उपन्यास हो आगोका बच्चाहरू, जहाँ यसले अघिल्लोबाट अक्षरहरू पुन: प्राप्ति गर्दछ।
(पोन्तेवेद्र, १ 1975 XNUMX)
लेखक र वकील, गैलिसिया टेलिभिजन र लिपि लेखकमा प्रस्तुतकर्ता। उहाँ हाल डायारियो डे पोन्तेवेदरा र एबीसीमा सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि Cadena SER को नियमित योगदानकर्ता हुनुहुन्छ। उनको पहिलो उपन्यास, Apocalypse Z: अन्तको सुरुवात, एक हॉरर थ्रिलर, एक इन्टरनेट ब्लगको रूपमा शुरू भयो जुन लेखकले खाली समयमा लेखेका थिए। यसको सफलताको आधारमा, यो २०० 2007 मा प्रकाशित भयो र एक उत्कृष्ट विक्रेता भयो।
उनका अर्को उपन्यास, अन्धकार दिनहरू y धर्मीहरूको क्रोधs, पहिलो को एक निरन्तरता थियो। तर निश्चित सफलता उहाँसँग २०१ 2013 मा आयो अन्तिम यात्री, मुख्य पात्रको रूपमा धेरै भूत प्रेत जहाजको साथ डरावनी उपन्यास।
२०० 2015 मा उनले प्रकाशित गरे चमक, अर्को उपन्यास संग कालो र भयानक सुझाव नायकको साथ जो एक अजीब यातायात दुर्घटना ग्रस्त छ कि उनको कोमामा छोडिन्छ। केही हप्ता पछि, र एक चमत्कारी पुन: प्राप्ति पछि, सबै कुरा पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ र कसैले उनको घर र परिवारलाई डाँठ लाग्न थालेको छ। यसका साथै, ऊ भूतप्रेतको साथ छोडिन्छ जुन उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
लुरेरियोको काम भन्दा बढीमा अनुवाद गरिएको छ दस भाषाहरू र देशहरूको संख्या मा प्रकाशित।
(ला Coruña, १ 1957 XNUMX) यो सब भन्दा लामो इतिहास र सफलताको साथ नाम हो। पूर्व लेखक, कवि, निबन्धकार र पत्रकार ग्यालिसियनले एल पासका लागि लेखहरू पनि लेख्छ। उनी स्पेनमा ग्रीनपीसका संस्थापक साझेदार र रोयल गलिसियन एकेडेमीका सदस्य पनि छन्।
छोटो कथा संकलन जस्ता शीर्षकहरू साइन गर्नुहोस् एक मिलियन गाई (१ 1989 XNUMX)), जसले ग्यालिसियन कथाको लागि आलोचक पुरस्कार जित्यो। OR माया, तिमी मलाई के चाहन्छौ? que कथा समावेश छ पुतली को जीभनिर्देशक जोसे लुइस कुइर्दाले सिनेमामा लगे। रोपले पनि इनामार्थी फिल्म बनाई सबै कुरा मौन छ२०१० मा प्रकाशित पिच कालो उपन्यास।
२०१ latest बाट उसको अन्तिम काम हो न्यूफाउन्डल्यान्डको अन्तिम दिन, उपन्यास जसले युद्धकाल पछि स्पेनिश प्रक्षेप बताउँछ र ला Coruña मा पुस्तक पसलबाट शुरू संक्रमण, क्लोजर द्वारा धम्की।
(लुगो, १ 1978 XNUMX)
अर्को नाम थाहा भन्दा बढी छ। पूर्व लेखक र एयरलाइन कमाण्डर उनले उपन्यास, कथाहरू, कविता, निबन्ध र लेख प्रकाशित गरेका छन्। प्राध्यापकको रूपमा उनले विभिन्न फोरमहरूमा भाग लिएका छन्, जस्तै विश्वविद्यालय केन्द्रहरू र रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रमहरू।
धेरै बहुमुखी, उसका शौकहरूमा खाना पकाउने, फ्लाइ फिशिंग, बोनसाई र फेसन समावेश छ। यो पनि च्याम्पियन सांस्कृतिक परियोजनाहरु को रूप मा लेन्डेरिया, पुन: प्राप्ति गर्न, ग्यालसियाको जादुई परम्पराको प्रसार र प्रसारित गन्तव्य।
२०० In मा उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित गरे, को भेड़िया को शताब्दी। २०१० मा यो थियो CAJA नीगरा, जुन २०१ 2015 मा पुन: जारी गरिएको थियो। २०१२ मा यो आश्चर्यचकित भयो Assur, एक ऐतिहासिक शीर्षक जसले सार्वजनिक र आलोचकहरूलाई जित्यो, सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने पुस्तकहरू मध्ये एक हो। नाटक र वाइकिsहरूको बीचमा हुर्केका र शिक्षित टुहुरो असुरको रोमांच, भ्रामक र यात्राहरू यस गर्मीका लागि उत्कृष्ट पढिएको हो।
२०१ 2013 मा उनले अर्को ऐतिहासिक प्रकाशित गरे, Ronin, जसले उनलाई हाम्रो देशमा यस विधाको सबैभन्दा बहुमुखी प्रतिभाशाली लेखकको रूपमा स्थापित गर्‍यो। जहाँ पहाडहरू कराउँछन् उनको अन्तिम ऐतिहासिक कार्य हो, जुलियस सीजरको समयमा सेट गरिएको शिकार र बदलाको कथामा नायकको रूपमा एक विशाल र असाधारण ब्वाँसो सहित। पक्कै पनि यो फेरि अर्को सफलता भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » Contemp समकालीन ग्यालिसियाका लेखकहरू जसलाई ज्ञात गरिनु पर्छ
म ती सबैलाई धेरै रमाईलो पाउँदछु।
Loveread24 लाई जवाफ दिनुहोस्
कथा र भूमण्डलीकरण: झुम्पा लाहिरी द्वारा असामान्य भूमि